Nhau - Vaya vanhu vakanyorwa matinji vanosarudza zvitema tattoo
Vanhu vakaiswa nyora vachasarudza zvitema tattoo
Wese munhu anoziva neshoko rekuti tattoo, handiti? Mazuva ano, mumaziso evanhu vazhinji, chero munhu ane tattoo pamuviri wake anozotorwa semunhu anoshamwaridzana. Vanhu vazhinji vakasarudza kutora maTattoo mukutsvaga izvo zvinonzi "kutonhorera" mumaziso avo. Matattoos ave maitiro mazuva ano, sevasikana. Wese munhu ane moyo wekuda runako, asi hapana kudemba pasi rino.
Sei uchidaro? Nekuti vanhu vazhinji vanozvidemba mushure mekunyora nyora. Zvinorwadza kana uchinge watora nyora, uye kutonyanya kurwadziwa kana uchibvisa iyo nyora. Vazhinji vevakaroora vechidiki vanoita zvinhu zvekupenga panguva yerudo, sekutora vaviri tattoo, asi zvakadii mushure mekurambana? Gara sechiyeuchidzo? Izvi zvakare hazvishande, nekuti kana usina iyi, uchave neinotevera. Paunobvisa iyo tattoo, unozodemba.
Vanhu vakaiswa nyora vanosarudza zvidhori zvetatoo?
Iyo tatoo inopukutwa zvakare kana iyo vara rikadzima, uye iyo pateni inoshandurwa kana usingaifarire. Mupepeti ane basa kwazvo kukuudza kuti matiketi ekunyora haakwanise kutsiva maTatoo. Zvidhori zveTatoo ndizvo zvinoda, uye iyo tattoo ndiye munhu anofambidzana nehupenyu hwese. Musiyano uripo pakati pezviviri uri pachena. Wese munhu anowanzo kuti: Une doro here? Ndine nyaya yematatoo ...
Nguva yekutumira: Aug-14-2020